Ungayithola Kanjani Imvume Yokuhamba? Ngabe isitifiketi semvume yokuvakasha sitholakala ku-e-Government? | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraUngasithola Kanjani Isitifiketi Semvume Yokuhamba? Ngabe ngithola isitifikedi semvume yokuhamba nge-e-Government?
30 / 03 / 2020 I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, JIKELELE, Izikhumulo zezindiza, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, TURKEY
Ungayithola kanjani incwadi yemvume yokuhamba?
Ungayithola Kanjani Imvume Yokuhamba? Ukuthola isitifiketi semvume yokuvakasha nge-E-Government? Izidingo Zokuthola Imvume Yokuhamba? Ubani ongathola iDokhumenti Lezimvume Zokuvakasha?
UMongameli Recep Tayyip Erdogan wenze isitatimende esithi "Ukuhamba okuningana kungaphansi kwemvume yabaphathi" maqondana nezimvume zokuhamba ngokuhlangana. Ngokusho kwesiyingi esikuwebhusayithi yoMnyango Wezangaphakathi; Ukuhamba ngebhasi le-Intercity ngeke kwenzeke ngaphandle kwezakhamizi ezinemibandela ebonwa ifanelekile ngabaphathi. Izakhamizi ezisweleke ezihlotsheni zokuqala noma ezinokugula okungathi sína nezakhamizi ezingenandawo yokuhlala, ikakhulukazi kulezi zinsuku eziyishumi nanhlanu zokugcina, zingafaka isicelo kohulumeni noma kubaphathi besifunda ukuthola imvume yokuhamba.
Ngaphezu kwalokho, labo abaqinisekisa ukuthi bayabandakanyeka ekwenziweni nasekukhiqizweni kwenqubo evela kumakamelo afanele abafundile, futhi nalabo abayizikhulu zikahulumeni kanye nabanikezeli ngemisebenzi yomphakathi ngeke babe nemingcele yokuhamba.
UNGASIZA NJANI ISICELO SOKUFAKA ISIQINISEKISO SOKUGWEMA?
Izakhamizi eziphoqelekile ukuhamba phakathi kwamadolobha zizofaka isicelo kwiBhodi Yezemvume Yezokuvakasha, ezosungulwa ngaphansi kokuxhumana kwababusi kanye nababusi besifunda, bese becela incwadi yokuvakasha. Kulabo isicelo sabo sithathwa njengokufanele, kuzokhishwa idokhumende yemvume yokuhamba ngebhasi yendawo yokuhlala, kubandakanya indlela yokuhamba nobude besikhathi. Ukuhlelwa kokuhamba ngebhasi kuzokwenziwa yiBhodi Yezemvume Yezokuvakasha futhi abantu abathintekayo bazokwaziswa.
Ibhodi Lezimvume Zokuhamba lizoklelisa uhlu lwezakhamizi ezizohamba ngebhasi, izingcingo zazo, nohlu lwabagibeli, okukhonjiswa amakheli abo lapho beya khona, kubaphathi edolobheni okuzohanjelwa kulo. Amabhasi avunyelwe ukuhamba angavele ame emaphethelweni wamabhasi edolobha ezindleleni zokuhamba futhi angathatha abagibeli abavunyelwe ukuhamba ngamaphalamende ezifundazwe lapho ema khona, uma kwenzeka kuba nesikhundla esisezingeni lawo. Izinsizakalo zokuvalwa kwezinkampani zamabhasi zizovunyelwa.
ISITATIMENDE SESITOLO SOKUQHAWULULA SIYENZIWA NGEZOBUHulumeni?
IHhovisi likaMongameli Wokuguqulwa Kwezedijithali selimemezele ukuthi iDokhumenti Lezimvume Zokuvakasha lingatholakala ku-e-Government kusukela manje. Esitatimendeni esenziwe kwi-akhawunti yakhe ye-Twitter, "Izakhamizi zethu ezizohamba ngaphansi kwezinyathelo ze-coronavirus akusadingeki ukuthi ziye kubabusi besifunda. Izicelo zezimvume zokuvakasha zise-e-Government portal.
Faka isicelo nge-e-Government Gateway
Isicelo sakho sizodluliselwa kwiBhodi Lezimvume Zokuvakasha futhi siyohlolwa yiBhodi.
Ngemuva kokuhlolwa okwenziwe yiBhodi Yezimvume Zokuhamba, abenzi bezicelo bazokwaziswa nge-SMS ngokuthi "Isicelo sakho samukelwe" noma isicelo sakho senqatshiwe.
Izakhamizi ezizokwamukelwa izicelo zazo zizokwamukelwa kumaDeski Wezicelo ezakhiwe ezikhumulweni zamabhasi noma esikhumulweni sezindiza, ngemuva kokuba ziqinisekisiwe ngenombolo yazo ye-ID.
ISIBONELELO SESIQINISEKISO SESITOLO SEPHEPHA
Ungawathenga kanjani Amathikithi wesitimela nge-HES Code? Ungayithola Kanjani IHes Code? Imvume yokuhamba ye-HES Code…
Ukuhamba Ngezindiza Nebhasi Ngaphandle Kwezimvume Zokuhamba
Kudingeka Imvume yokuhamba ngebhasi
Izicelo Zokuvunyelwa Kwezokuvakasha Abakhiqizi Betiyi ziyaqala
Inhlangano Yokuhlela Uhulumeni Akuvumeli Uhlelo lwe-Şanlıurfa Tram
ISitifiketi se-SRC nayo i-e-Government
I-TCDD Transportation Co. I-ISKUR izoqasha abasebenzi ngaphezulu!
Pamukova Train Accident Ngonyaka we-15 usuDlule kodwa izifundo azizange zithathwe
Isimemezelo Sokuthenga Kwabasebenzi se-TCDD Ishicilelwe nge-DPB
UNgqongqoshe Wezezimali waseJalimane uSchaefer Uthole Eseshonile Kulayini Ophezulu
Abashayeli Bakhuluma Ngobuningi obenzeka Kumabhasi ama-2 e-Istanbul
Iyini i-Izmirim Card, indlela yokuthenga, ukulayisha nokuphishekela kanjani?
BTK ukuphuma imithwalo Turkey Iron Silk Road
Ubuhle obugijima phezu kwezingcingo e-Samsun kwashaywa yi-tram
I-Konya izoxhunyaniswa emhlabeni nge-Mersin
I-Pamukova ibhekene neminyaka engu-14